Ny androaniko | 51
[Ankapobeny ] 08 Septambra, 2007 21:51
Toko tapaka, vilany mitongilana.
[Ankapobeny ] 27 Aogositra, 2007 22:45
Vive la rentrée ! vita ny fialan-tsasatra...
Sady nanao adidy nanotrona fanambadian'ny namana tany Venise no nanararaotra nijery tanàna, Na dia efa hita aza tsy nankaleo.
Niverina kely tany an-trano aloha nanamboatra valizy dia roso indray nankany Afrika herinandro (hoy i Hery koh!)
Vazivazy moa izany fa tany atsimo-atsinanan'i Italia tany e, tany amin'ny faritry ny Puglia (Les Pouilles) no naleha.
Tao Monopoli (tokony ho 30 km avy eo Bari), tanànan'ny mpanjono; fa tany Castellana-Grotte, tanàna kely 10 km eo ho eo avy eo Monopoli no nisy ireo namana nampiantrano, ka nanararaotra nijery ilay lavabato lalina teo amin'ny 70 m any ambanin'ny tany. Azoazo ery ny aina tamin'ny hatsiatsiaka 15° raha midanika efa ho 40 ° aty ivelany.
Tsy natao ambanin-javatra ny filomanosana an-dranomasina tao Monopoli, satria arakaraka ny hidinanana mianatsimo an'i Italia no hahitana ranomasina madio sy tsara sady milamina tsy mba be olona.
Tsy lavitra avy eo Monopoli no misy an'i Alberobello. Isan'ny "Patrimoine de l'Unicef" izy io noho ireo trano "trulli" mampiavaka azy, igloo italien no fiantsoako azy am-bazivazy. Nahavariana tokoa, matevina efa ho 1 m ny hatevin'ny rindrim-bato ka mangatsiatsiaka ery ao anatiny. Raha any an-tanàna izy dia trano fonenana fa raha any an-tsaha dia fasiana biby sy fitaovam-piasana.
Ostuni : "la ville blanche" (la città bianca), mierinerina eny an-tampon-kavoana, mianatsimo ihany efa hihazo an'i Brindisi (amin'ny zorony havanana amin'ny saritany, tanàna manaraka an'i Montalbano).
Mbola isan'ny tafiditra ho isan'ny "Patrimoine de l'Unicef" koa i Matera, efa any amin'ny faritry ny Basilicata, miankandrefana indray, hihazo an'i Taranto (amin'ny zorony havia amin'ny saritany, ambany kely an' Santeramo in Colle). Matera dia antsoina koa hoe "la ville des pierres" noho ireo tranony miorina amin'ireo vatolampy be, izany hoe noloarana tamin'ireo vatolampy.
Ny tena nampalaza an'i Matera ihany koa, ho an'ireo izay tia sarimihetsika, dia noho izy nanodinana ny "La passion du Christ" tamin'ny 2003, ka io amin'ny ankavanana aorianako io no natao havoanan'i Golgota, namantsihana an'i Jesoa tamin'ny hazo fijaliana, ary io ankaviako io kosa sy ity ambany ity
ny tanànan'i Matera nanaovana ny làlan'ny hazo fijaliana, izany hoe ilay niakarany nitondra ny hazo fijaliany.
[Ankapobeny ] 10 Aogositra, 2007 19:31
“ Notte di San Lorenzo “ – “Ny alin’i Md Laurent “
Rehefa tonga ny alin’ny 10 aogositra dia mibanjina ny faravodilanitra avokoa ny Italiana maneran-tany miandry ny handalovan’ireo kintana hiraraka.
Hatr amin’ny ela no nanokanan’ny Italiana ity alina ity ho an’i Md Laurent (San Lorenzo), maty maritiry tamin’ny taonjato fahatelo, ary milevina ao amin’ny Basilica iray mitondra ny anarany eto Roma ; satria ireo kintana miraraka ireo dia tsy inona fa ranomaso nalatsak’ity olomasina ity nandritra ny fampijaliana azy, ka miriaria foana eny an’habakabaka eny ka tsy midina ety an-tany raha tsy mitsingerina ny fotoana nahafatesany, ka mahatonga ity alina ity ho toy ny alin’ny nofy sy hitondra fanantenana.
Rehefa tonga ny “Notte di San Lorenzo” dia heverina fa ho tanteraka ny fanirian’izay miezaka mahatsiaro ny fijalian’i Md Laurent, ka isaky ny kintana mianjera dia anononana izay mba irina amin’ny fiainana.
Marihina moa fa araka ny siansa, ireo kintana mirotsaka amin’ny alin’ny 10 aogositra dia vokatry ny fandalovan’ny asteroidy ao amin’ny Vondron-kintana Perseo (nahatonga ny anarana hoe Perseides) eny amin’ny faritra tazamason’ny tany, saingy azo ampivadiana tsara amin’ny lafiny poetika.
Ka raha sendra mibanjina faravodilanitra re, aza hadino ny mamboraka ny fanirianareo tsirairay avy!
[Ankapobeny ] 06 Aogositra, 2007 14:58
Olo-jiaby amin'ny fomban-taniny - tapany faharoa
Tapany faharoa tokoa izy ity, satria tontosa soa aman-tsara tamin’ny 14 jolay teo ny fanambadian’ireto namanay, Marika sy Gianluigi.
Raha ny tokony ho izy dia tokony hanao “sérénade” ralehilahy tamin’ny zoma 13 jolay hariva, fa efa nampoizina ihany fa tsy hahasahy hiakatra sehatra ranamana. Fa ny tena votoatin’ilay fety kosa dia ilay antsoin-drizareo hoe “Fiaingana” (partenza), izany hoe andro farany hipetrahan-drazazavavy ao an-tranony fa hanainga hamonjy ny akaniny izy ny ampitso.
Ny ampitso kosa rehefa vita ny fanamasinana ny fanambadiana dia nanolotra fialana hetaheta teo an-tokontanim-piangonana aloha ny fianakaviana ; kanefa ny tena nahasarika anay tsy tompon-tany dia ity fomba ity : natao an-tongotra daholo moa ny làlana na tamin’ny nandroso na nony nivoaka ny fiangonana fa ny fiara rehetra dia niandry teny am-pidirana ny tanàna daholo. Ny antony dia eo ny hateren’ny làlana, fa teo koa ireo fialana hetaheta kely atolotry ny mpiray tanàna ho an’ny mpivady vao sy ny mpanotrona (banquet, na “banchetto” amin’ny teny italiana), ka amin’izany dia mitambatambatra ny fianakaviana telo na efatra dia mba mamelatra ireo banquet ireo manoloana ny tranony izay lalovan’ny mpanambady. Ka adidy moa ny mandray isaky ny fiantsonana ka toa vao tsy nandray fiara hamonjy restaurant akory (izay tany amin’ilay tanàna iray hafa mba lehibebe) dia efa voky sahady, hihihi.
Na tany am-piangonana na tany am-pisakafoanana aloha dia tsy nalaiko sary satria efa mahazatra ireny.
Taorian’ny sakafo dia samy namela fiara teo am-pidirana ny tanàna daholo indray, dia niara-niakatra an-tongotra hanatitra azy mivady kely any an-tokantranony vaovao. Ka izay fianakaviana tsy nanolotra banquet tamin’ny nandroso indray no nanolotra teto.
Nony tonga tao an-tokontanin’izy mivady dia nisy vatan-kazo lehibe dia lehibe (notaritina tamin’ny trakitera hono vao tafakatra tany, nandritra ny nahatany am-piangonana anay, lol) nibahana ny tokonam-baravaran’izy ireo. Fomba ao amin’io tanàna io izy ity hanehoanao amin’ny rehetra fa tsy mandà izay rehetra adidy sy olana eo amin’ny fiainan-tokantranonao ianao fa vonona foana hisikim-ponitra, saingy noho i Gianluigi tovolahy tena mahafatra-po amin’ny asa, dia toa ho tapany vetivety raha vatan-kazo kelikely, ka dia nitadiavan-drizareo izay lehibe indrindra izy.
Raha nilazana moa izahay hoe miara-miakatra any antrano daholo rehefa avy any amin’ny restaurant fa mbola hihinana "cochon laqué" fa izay no tena mba spécialté any amin’io faritra io, dia saika torana aho fa ny teo aza tsy tafidina intsony ! Kanefa teo vao azoko fa hay mbola ho lava ny fiarahana fa tsy hoe aterina fotsiny ny mpivady vao, satria rehefa tapaka ny vatan-kazo ka afaka niditra ny tranony izy roa dia izahay mbola nanohy nihinana sy nisotro teo ivelany ihany.
Rehefa tafiditra soa aman-tsara tao an-tokantranony izy roa kely dia mbola tsy vita hay ny "sedra", fa hay mbola nofenoin'izy ireo fotsimbary tsy haiko na iray gony na mahery ny fandriana sy efitrano fandrian'ny mpivady vao. Dia mbola tsy maintsy nanadio izay indray izany aloha izy ireo.
Ny hevitr'ireto sedra moa izany dia toa ny firariana azy mivady kely ho vonona hatrany amin'izay rehetra hitranga eo amin'ny fiainana sy amin'ny adidy aman'andraikitry ny tsirairay : rangahy hiasa mafy, ramatoa hahakarakara tokantrano.
Vita izany rehetra zany, izahay nanohy nisotro sy nihinana sy nivazo...satria hay re ka mbola miandry amin’ny 1 ora maraina indray fa hofohazina amin’ny “sérénade” indray re ireto izy mivady kely !
Efa tamin’ny 2 ora maraina vao namonjy torimaso - izahay izany fa zareo mbola teo asa tamin'ny firy vao nisaraka an.
Nahafinaritra sy nahavariana ahy tokoa izy ity ka tsy aritro ny tsy hizara azy eto, ilay horonantsary nisy olana dia tsy mety apetraka eto fa dia aleo sary vitsivitsy no hilaza azy
Tena tsy nandàla vola aman-karena ireo ray aman-dreny tamin’ny fikarakarana kanefa dia nambaran’izy ireo fa izay no tena fety aminy fa tsy ny fanamasinana sy ny fiaraha-misakafo fotsiny akory, ka raha tsy manao ireo izy dia toy ny tsy manao fety ary aleony aza tsy manao.
Dia miverina indray ilay hoe “olon-jiaby amin’ny fomban-taniny”.
[Ankapobeny ] 04 Jolay, 2007 12:25
Ny 26 jiona-n'i Roma (fanampiny, "in live" fohifohy)
Efa nolazalazain'i Hery ihany ny fizotran'ny 26 jiona-nay izay tena koranam-pianakaviana foana no endriny. Dia ity izany ny fanampiny, "live" teny am-panombohana noezahina ho fohy izy ity (8min) fa ny mpaka horonantsary koa nony kelikely nametra-pialana fa izy kosa ve tsy hitotorebika - marina ny azy.
Misimisy ihany ny namana serasera tao araka ny voalaza, saingy toa tsy tratra an-tsary ao daholo, misy ny tara toy ny mahazatra angamba, na efa tonga ao ihany fa mbola variana mibosibosika ravintoto sy voanjobory, satria efa tara sambo tamin'ny fandalovan'ny lasary sy composé ary ny nems sy sambos ; samy manana ny talentany koa moa rehefa toa izao, ka ao ny manan-talenta amin'ny fanafanana sehatra dia izy foana no hita matetika ao amin'ny sary, ao ny eo amin'ny lafiny fanafanana lovia, ny fanafanana hira, ny fanafanana resaka, ny fanafanana seza koa, samy mba manao izay vitany daholo, ka izay tsy hita eto dia ao amin'ny tahirintsary angamba no mety hiseho : tao ry hery, ry angie, ry mbaliana, ry nanji, ry colar, ry matrix, ry fehno, ry tsiory, sy izay tsy fantatra ny ps-ny fa nisinisy ihany ny namana tao, ary ikalamako mazava ho azy, fa dia taditadiavo ao daholo re e. Dia nampalahelo koa fa efa alinalina moa vao natao ilay medley kaiamba ka efa tsy tafiditra anaty horonan-tsary intsony fa sahirana nanezakezaka nihira koa angamba ny mpaka azy.
Vita soa aman-tsara moa iny ka dia miandry izay mety ho fety manaraka indray izahay fa "miova andriana manko hono miova sata", ka dia eo mahita izy...
Ho tratry ny asaramanitra manaraka daholo indray.
«Mialoha 1 2 3 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Manaraka»